‘Ayethengwa amavoti eNasrec’ - owayengungqongqoshe
Owayengungqongqoshe KwaZulu-Natal uDkt Meshack Radebe uthi kwamethusa akubona kwingqungquthela ye-ANC eNasrec, eGoli, ngo-2017. Isithombe: Doctor Ngcobo/African News Agency(ANA
Bongani Hans | August 22, 2019
OWAYENGUNGQONGQOSHE KwaZulu-Natal uMnuz Meshack Radebe uthi wazibonela ngawakhe abaholi kuKhongolose bethenga amavoti kwingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha eyayibanjelwe eNasrec, eGoli, ngo-2017.
Lo makadebona we-ANC uthi akubona kule ngqunguthela kwamcacisela ukuthi abaholi abakule nhlangano abasenzi ngendlela efanele.
URadebe ukhulume ne-Independend Media kuleli sonto ekhaya lakhe eMaqongqo, ngaseMgungundlovu. URadebe wayengungqongqoshe emnyangweni wezoLimo nasemnyangwei wokuThuthukiswa koMphakathi, kanti ubeyiphini likaSomlomo eSishayamthetho KwaZulu-Natal.
Uthe uhoxe ebuholini be-ANC engene ohlwini lwesigungu esiphezulu se-ANC KwaZulu-Natal.
UMENGAMELI Cyril Ramaphosa owanqoba kwingqungquthela yokubekwa kobuholi obusha eba ngumengameli omusha we-ANC ngonyaka ka-2017. Isithombe: Ayanda Ndamane
“Ngesikhathi ngisula ngabazisa ukuthi ngishiya ngenxa yezinto engazibona eNasrec engangingakwazi ukuzimela. Nokho, ubuholi, okubalwa kubo uNxamalala (uMnuz Jacob Zuma owayengumengameli kuleli) bangicela ukuthi ngiqhubeke ngemuva kokhetho,” usho kanje.
URadebe ubekhuluma kulandela imibiko yokuthi abaholi babesebenzisa imali ukuthola ukwesekwa kwingqungquthela yokuqoka ubuholi obusha eNasrec, lapho kwaqokwa khona umengameli Cyril Ramaphosa njengomengameli omusha we-ANC ehlula uDkt Nkosazane Dlamini-Zuma.
“Ehhotela engangihlala kulo imali yayikhishwa obala. Ababeyingxenye yengqungquthela babeza ngamabhasi bezolanda imali. Oyedwa wowayenikeza abantu imali usewungqongqoshe. Babenikezwa imali beyibala ifinyelele ko-R5 000, R3 000, R4 000. Abanye babekhalaza bethi imali abayinikeziwe ayanele,” kusho uRadebe.
UMHOLI we-ANCWL uNkk Bathabile Dlamini noDkt Nkosazane Dlamini-Zuma ababenethemba lokuthi uzoba ngumengameli wokuqala wesifazane kwi-ANC. Isithombe: Reuters, Siphiwe Sibeko
Okhulumela i-ANC kuzwelonke uMnuz Pule Mabe ngoLwesithathu ebusuku unqabile ukuphawula kulolu daba wathi akazi lutho ngokushiwo uRadebe.
Okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uMnuz Ricardo Mthembu uthe uRadebe wakhuluma nenhlangano kuphela ngesikhathi kuvela igama lakhe ohlwini lwabaya eSishayamthetho sesifundazwe. Uthe ngaleso sikhathi uRadebe wacela ukuthi lihoxiswe igama lakhe ngoba usesondele kwiminyaka ewu-70 futhi uselangazelela ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe.
Namhlanje umengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi aphekwe ngelincane uma esepheundula imibuzo ephalamende. URamaphosa kulindeleke ukuthi aphendule imibuzo ethinta umnikelo awuthola eBosasa kaR500 000, nezinye izigidi zamarandi axhaswa ngazo ngemikhankaso yeCR17. Kulindeleke ukuthi acacise futhi ngokusebenza kweNational Health Insurance (NHI) kuleli.